Governemanta Japoney Nanome fanampin-tsakafo 6.000 baoritra ny any Atsimo
Nifarana ny tetikasa fanamafisana ny fanarahamaso ny fanjariantsakafo tany amin’ny distrika 8 any amin’ny tapany Atsimon’i Madagasikara.
Ny UNICEF niaraka tamin’ny ministeran’ny fahasalamam-bahoaka no nanatanteraka izany, nandritra ny herintaona, ary novatsian’ny governemanta japoney vola. Mihoatra lavitra ny tanjona napetraka ny vokatra azo tamin’izany, araka ny tatitra nataon’ny UNICEF. Zaza 6 hatramin’ny 59 volana miisa 185 000 mantsy no voatily tao anatin’izay herintaona izay ary miisa 14 255 kosa ireo izay tratran’ny tsifanjariantsakafo mahery vaika no voatsabo. Ankoatra izay dia renim-pianakaviana miisa 27 000, tany amin’ireo distrika 8 ireo no nahazo fiofanana momba ny fitiliana ny tsifanjariantsakafo mahery vaika ; fanampin-tsakafo “Plumpy’Nut” 5 000 baoritra no natolotry ny UNICEF sy ny masoivohon’i Japana ho an’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka, hanamafisana ny fitsaboana an’ireo zaza mila tohana ara-tsakafo haingana. Mbola nampian’ny governemanta japoney 6 000 baoritra io “Plumpy’Nut” io, ka omaly no nanoloran’Atoa Higuchi Yoshihiro, masoivohon’i Japon eto Madagasikara sy Atoa Michel SAINT-LOT, solontenan’ny UNICEF eto amintsika, an’izany, tamin’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka. Tanjona ny hanohizana ny ezaka atao amin’ny ady ho amin’ny fanjariantsakafo, na mifarana aza ity tetikasa ity.